ဇော်အောင်(မုံရွာ) - ကိုရိုနာနှင့် ၁နှစ် အတူနေထိုင်ရေး - MoeMaKa Media
Home / Community / Coronavirus / Zaw Aung (Mon Ywa) / ဇော်အောင်(မုံရွာ) - ကိုရိုနာနှင့် ၁နှစ် အတူနေထိုင်ရေး
ဇော်အောင်(မုံရွာ) - ကိုရိုနာနှင့် ၁နှစ် အတူနေထိုင်ရေး
Community, Coronavirus, Zaw Aung (Mon Ywa)
(မိုးမခ) မေ ၁၁၊ ၂၀၂၀
တကမ္ဘာလုံး နိုင်ငံတိုင်းက ကိုရိုနာကပ်ရောဂါ နဲ့အတူ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ အလုပ်ရုံများပိတ်ပြီး စနစ်တကျပြန်ဖွင့်၊ Quarentine လုပ်ခြင်း၊ လက်ဆေး၊ Mask တပ်ဆင် ခပ်ခွာခွာနေခြင်းများနဲ့ ရန်ကုန်မြို့မှာ ပြန်လည်စည်ကားလာပါပြီ။ ဒုတိယလှိုင်း ပိုးတွေ့သူ ရာနှုန်း မြင့်လာမှာ အစိုးရတိုင်း စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။
အရင်တစ်ပတ်က ပိုးတွေ့/Test ရာနှုန်းက2.2% ရှိတယ်လို အစိုးရ ကြေညာပြီး ဒီနေ့ 10-May အချက်လက်များအရ ပိုးတွေ့ 178 ဦး နဲ့ Test 11222 ဦး ဖြစ်တော့ ရာနှုန်း 1.58% ကျဆင်းသွားပါတယ်။ ပြန်နေကောင်း -ve ပိုးမတွေ့ Test ၂ကြိမ် ရရှိပြီးသူ 68 ဦး မှာ ဆေးရုံဆင်းသွားသူ အများကြီး ရှိနေပါပြီ။ တကမ္ဘာလုံးလဲ ပိုးတွေ့ ကျဆင်းသွားတာ ဝမ်းသာစရာ သတင်းကောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မှာပဲ ၈၀% ပိုးတွေ့သူ အများစုက ရန်ကုန်မှာ ဖြစ်ပြီး ပြည်ပ ကနေကူးစက်စေလို့ Q ကြပ်မတ်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ မြန်မာ ပြည်နယ်တိုင်း ကျေးလက်များမှာ မကူးစက်ဘူး ဆိုတော့ ဘာကြောင့်လဲ စဉ်းစားနေစရာမလိုပါ။ ဗိုင်းရပ်ဟာ လူပါးစပ်ကနေ အလုံပိတ်ခန်းတွေ၊ အဲကွန်းခမ်မမှာ စုဝေးနေတဲ့လူစုလူဝေးကပဲ ကူးစက်တာ ကြောင့်၊ ကျေးလက် နယ်မြို့များမှာ ကူးစက်မှု အလွန်နည်းရတာပါ။ အမေရိကားနဲ့ဥရောပမှာလဲ ကျေးလက်မှာ ကူးစက်မှု အရမ်းနည်းပါးပါတယ်။ မြို့ပြတွေပဲ များစွာ ကူးစက်ပါတယ်။
Test လုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းခြင်း
ဘယ်လောက်တွန်းပေမဲ့ ရွေ့မှာ မဟုတ်ပါ။ လက်ရှိ PCR Swab နည်းလမ်းကိုတောင် Effective စွမ်းဆောင်ရည် အပြည့် မလုပ်နိုင်၊ Cobas 6800 စက်ကြီး လှုဒါန်းထားတာ Test လုပ်ပါလား မေးခွန်းကို Dr. ခင်ခင်ကြီး က Regents (Test Kit) မရှိရင် Test စက်တွေရှိလဲ လုပ်မရပါ လို့ ဖြေ သွားပါတယ်။
ကံကိုယုံ၍ဆူးပုံနင်းနေတာက ရန်ကုန်လူထုပါ။ လူငယ်တွေဆိုရင်လဲ ကူးမှန်းမသိပဲ ပြန်ကောင်းသွားကြသတဲ့။ အဲဒီလူငယ်နဲ့ ထိတွေ့သူ အသက်၆၀ကျော်တော့ မနည်းခံရမယ်။ စင်ကာပူလဲ ကူစက်ခံ ၂၀၀၀၀ မှာ.. သေနှုန်း ကမ္ဘာ့အနည်းဆုံး။ ဒီမှာ သေတဲ့ ၆ယောက်က c#2(65) c#16(63) c#17(47) c#39(85) c#86(78) ဆိုတော့ ၇၀အောက် ၃ယောက်ပါတယ်။ ဆေးရုံက ဆင်းသွားသူများမှာ အသက်၆၀ကျော် 10 ဦး အထဲမှာ ကျိုင်းတုံက 85 နှစ် အာဂဖွားဖွား လဲပါတယ်။
လူငယ်များက ခံနိုင်ရည် ရှိလို့ပိုးတွေ့လည်း ပြန်ကျန်းမာ လာကြပေမဲ့ အကြီးမားဆုံးပြသနာက ရောဂါ လက္ခဏာမပြပဲ၊ ပိုးတွေ့ ပြီး ကျန်းမာ လန်းဆန်းစွာ ရှိနေသူ 58% ဖြစ်နေတာ အထူးသတိထားရမှာပါ။
- အလုပ်ရုံများ၊ လုပ်ငန်းခွင်များမှာ စည်းကမ်းလိုက်နာဖို့ အလုပ်ရှင် နဲ့ အစိုးရစစ်ဆေးအဖွဲ့ တာဝန်ရှိပါတယ်။
- လော်နဲ့ တနေ့၅ကြိမ် အော်ပြီး ပညာပေးဖို့ အရမ်းလိုအပ်နေဆဲပါ။ အစိုးရကြေငြာချက်ဆေးတက္ကသိုလ်ဘွဲ့လွန်များ Covid19 ရန်ကုန်၊ပဲခူး ၅၉၇ဦးကို (20-40 yrs..Mar 3-20) မေးမြန်း သုတေသနအရ..98% Covid19 ကြားဖူး...27% ရောဂါလက္ပြနိုင်...55% လက်ဆေးရမှာသိ...45% လူထူထပ်ရှောင်ဖို့သိ...62% သွာလာထိန်းချုပ်မှုလက်မခံ...99% ပြည်သူကူညီရန်သဘောတူ.လို့ သိရပါတယ်။ ထိုကြောင့် လော်နဲ့တစ်နေ့၅ကြိမ် အော်ရန်လို နေပါသေးတယ်။(မအော်ကြပါ)။
- ကျေးလက်၊ မြို့နယ်များမှာ ကူစက်ဖို့ လမ်းနည်းပါတယ်။ ကူးစက်ရင်လဲ ရာသီဥတု ပူပြင်းချိန် ပျောက်ကင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ အလုံပိတ် အဲကွန်းခမ်းမ များ သတိထားပါ။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် နယ်မြေများ၊ စစ်ရှောင်စခန်းများ ကပ်ရောဂါနဲ့ ကင်းဝေးသလိုဖြစ်နေပါတယ်။
- သက်ကြီးသူများကို ခပ်ခွာခွာ နေထိုင်ပါ။ သူတို့မှာ ခုခံအားနည်းလို့ ကူးစက်ရင် မလွယ်ပါ။
- အစိုးရက Test ကို အားမထားပါ။ Test တစ်နေ့ အကြိမ် ၅၀၀ လုပ်နိုင်ဖို့ အစစ အရာရာ အားနည်းပါတယ်။
- ကိုရိုနာ ကပ်ရောဂါ နောက်တစ်နှစ် အထိ ရှိနေမှာ သေချာပါပြီ။ ကာကွယ်ဆေး အောင်မြင်သွားရင်တောင်မှ သန်း၆၀၀၀ ဆေးထိုးဖို့ ဆိုတာ မလွယ်လှပါ။ လက်ရှိ ပိုးတွေ့ ၄ သန်း (0.05% of world population affected) ပဲ ရှိတာတောင် ကမ္ဘာ့လူသားအားလုံး တုံလှုပ်ရပါတယ်။
- မြန်မာအစိုးရ က အဆက်မပြတ် ပညာပေး၊ စည်းကမ်းလိုက်နာဖို့ ၊ စီးပွားရေး ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံး နဲ့ လူထုမအုံကြွစေဖို့ လက်နက်ကိုင်များ၊ အစိုရ နဲ့ ပြည်သူလူထု ညီညွတ်မှုရှိနေကြပါတယ်။
- Covid19 (15 p) Government PLAN for Economic Releaf was announced on 27-April. Budget also Hluttaw will discuss and decide ASAP.
မြန်မာပြည် ကိုရိုနာ ကူးစက်နှုန်း အောင်မြင်စွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါစေ။ ပိုးတွေ့နှုန်း လက်ရှိ 1.58% ကို ဆက်ထိန်းနိုင်ပါစေ။
Test မြန်မာ၊ စင်ကာပူ
ဇော်အောင်(မုံရွာ) - ကိုရိုနာနှင့် ၁နှစ် အတူနေထိုင်ရေး Reviewed by MoeMaKa on 4:51 AM Rating: 5